Wafdi ka socda AMISOM oo gaaray Kismaayo - Halbeeg News
Wafdi ka socda AMISOM oo gaaray Kismaayo
KISMAAYO(HALBEEG)-Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo wakiilka Midowga Afrika ee howlgalka Somaliya Francisco Madeira ayaa maanta oo Isniin ah gaaray magaalada Kismaayo, xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka Jubbaland.
Diyaaradda sidday wafdiga ayaa kolkii ay caga dhigatay garoonka magaalada Kismaayo waxaa halkaas kusoo dhaweeyay qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada AMISOM ee halkaas ku sugan iyo xubno ka tirsan maamulka Jubbaland.
Wafdiga ayaa loo galbiyay madaxtooyada maamulka Jubbaland oo ay kulan kula qaadan doonaan madaxweynaha Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulkiisa.
Inta uu socdo kulanka, labada dhinac ayaa la filayaa in ay ka wada hadlaan arrimo la xiriira ammaanka deegaannada Jubbaland iyo la dagaallanka ururka Alshabab.
Dhanka kale, wafdiga ayaa la filayaa in ay xarigga ka jaraan saldhig boolis oo ciidamada AMISOM ay ka hirgeliyeen xaafadda Dalxiiska oo ka tirsan Farjanno.
Saldhiggan cusub ee maanta laga furayo magaalada Kismayo ayaa la dhagax dhigay horraantii bishii Luuliyo ee sanadkan si saldhigga uu uga qeyb qaato ilaalinta ammanka xaafadda iyo guud ahaan magaalada Kismaayo.
Saldhigan ayaa qeyb ka ah mashaariic fara badan oo ciidamada howl galka Midowga Afrika ee AMISOM ay uga qeyb qaadanayaan sara u qaadidda nabad gelyada iyo xasilloonida dalka.
Danjiraha Suudaan ee Soomaaliya oo nuqul warqadaha danjirenimo laga guddoomay